विचार/ब्लग – Page4– NQKhabar
चिसाङ्ग शेर्पा -खोटाङ्ग सृष्टिकर्ता देखि सुरुवात भएको यो सस्कार सदियौसम्म रहिरहनेमा कोहिको दुईमत त नहोला अक्सर त्यही जन्म र मृत्युबिचमा हामीले इतिहास कायम गर्ने सुयोग्य कर्म गरेर सन्सारलाई अलविदा गर्नु जिबनको अर्को नाम दिनु हो । हरेक मान्छेको जन्मको पछाडी अर्को पात्र लुकेका हुन्छन,जन्म लिनु उसको..
गजल-बिन्दा लामा “तृष्णा”
बिकास देशमा आउँदैन हड्ताल आइरहन्छ। राँको बोक्दै चोकचोकमा मसाल आइरहन्छ। चुनाव पछि चारचार बर्ष फर्कदैन नेता ज्यु फर्कीएर हल्लाउन त भुइचाल आइरहन्छ। केही गर्न सोच्छु केही अघि बढ्न खोज्छु तगारा लाई नाघ्छु फेरि पर्खाल आइरहन्छ। बर्सौँ भयो परेवाका जोडि हरू उड्दैनन मुर्दावाद र जिन्दावादको बगाल..
जाऊँ अगाडि जाऊँ भन्दैछ पाइलाले। जा-जा म साथमा छु भन्दैछ पाखुराले। आऊ स्वदेश आऊ बोकेर जोश जाँगर । खोज्दै छ श्वेद तिम्रो यो राष्ट्रको धराले।। भन्नेहरू सबैले भन्छन् भुल्यौ प्रवासी। के भुल्न सक्छु? बाँच्नै धौँ हुन्छ सम्झनाले। पौरख गरेर कोही बाँच्छन् जितेर विश्व । अल्छी मनुष्य जित्छन् संसार कुरै..
देश दुख्छ -विन्देश्वर ठाकुर
देश दुख्छ (कविता) हरेक रात सपनीमा आगोको एउटा डल्लो देख्छु मेरै ओछ्यानमा खस्छ,सल्कन्छ अनि घर हुन्छ - स्वाह : म झस्कन्छु,ब्युझन्छु र ह्वात्तै अखबार हेर्छु अखबारमा छापिएका हुन्छन् - आन्दोलन चर्किएको कुरा गोली दागिरहेको खबर अभावले मरिरहेका जनता अनि अनवरत रोइरहेका सहिदका परिवारहरु । नसा दुख्छ,टाउको..
लक्ष्मण खनाल, युएई “बाबु मैले एउटा अभियान चलाउने भने सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्नु प¥यो । ” “कस्तो अभियान ” ? “नेपाल भारत सिमामा काँडेतार र पर्खाल लगाउन आर्थिक संकलन अभियान ” । “कुरा एकदम ठिक हो दाई तर यो राज्यको केन्द्रिय राजनीतिसंग जोडिएको विषय हो र देशका शासन सत्तामा रहेका नेताहरुको जबसम्म..